Naya Bikalpa | मन्त्रालयमै बोलाईयो सिनेट बैठक, स्वास्थ्यमन्त्रीकाे भूमिका शंकास्पद ! - Naya Bikalpa मन्त्रालयमै बोलाईयो सिनेट बैठक, स्वास्थ्यमन्त्रीकाे भूमिका शंकास्पद ! - Naya Bikalpa
मन्त्रालयमै बोलाईयो सिनेट बैठक, स्वास्थ्यमन्त्रीकाे भूमिका शंकास्पद !
विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कराेडाैं अनियमितता
प्रकाशित मिती: २०७७ श्रावण २६, १६: ५२: २१
काठमाडौं–कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) का कारण देश आक्रान्त भएको छ। दैनिक जनजीवन ठप्प प्राय भइरहेको छ । लामो लकडाउन पछि आंशिक रूपमा सामाजिक गतिविधि खुलेपनि मानिस जिल्ला बाहिर आउजाउ गर्न सकेका छैनन् ।
यसको सवैभन्दा असर दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विरामीमा परेको छ । समान्य औंषधि उपचार समेत नपाई दैनिक अकालमा विरामीको मृत्यु भईरहेको छ । विरामी मध्ये पनि सुत्केरी तथा बालबच्चाकाे प्राथमिक उपचार नपाई अकालमा ज्यान जाने खतरामा छन् ।
चैत ११ देखि देशभर लक–डाउनको घोषणा संगै आवत–जावतमा समस्या हुँदा कतिपय विरामी जीवनजल समेत नपाई मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । अस्पतालमा विरामीले सहज रुपमा उपचार पाउने अवस्था छैन् ।
अधिकांश निजी अस्पतालले विरामीका लागि अस्पतालको ढोका बन्द प्रायः गरेका छन् । यही कोरोनाले गर्दा आमनागरिक घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य भएकाे बेला नेपालको पूर्वी क्षेत्रको नाम चलेको अस्पताल धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने करोडौंको अनियमितता भएको पाईएको छ ।
प्रतिष्ठान अन्तर्गत मातृशिशु भवन निर्माणका लागि २१ करोड वजेट विनियोजन भएकोमा १५ करोड बढी भ्रष्टचार भएको खुलेको छ । मातृशिशु भवनको काम अलपत्र पारिएको छ ।
नयाँ विकल्पलाई प्राप्त सूचनाअनुसार सो भ्रष्टचार ढाकछोप गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सक्रिय रुपमा लागेका छन् । मन्त्री ठकालकै योजना अनुसार कार्यकारिणी समितिलाई छलेर आगामी साउन ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सिनेट बैठक बोलाएका छन् ।
कार्यकारिणी समितिले तयार पारेर पास गरेको प्रस्ताव मात्र सिनेट बैठकबाट पास गर्नु पर्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार सिनेट सदस्य सहित प्रतिस्ष्ठानका झन्डै ५० सदस्यलाई सिनेट बैठकमा सहभागी हुन पत्रचार गर्ने तयारी भएको छ ।
नेपाल सरकार तथा मन्त्री ढकालले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था आउन सक्ने र उपचार नपाई मृत्यु हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई अत्यावस्यक परेमा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छन् ।
सरकारले अत्यावस्यक सेवा बाहेकका भेला, सभा, सेमिनार, गोष्ठी नगर्न आग्रह गरिरहेका बेला मन्त्री ढकालले आफ्नै मन्त्रालयमा ५० जना भन्दा बढिको सिनेट बैठक हतारमा किन बोलाए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारकारी कामकाजका लागि अति अत्यावस्यक भएमा २५ जना नबढनेगरि तथा भौतिक दुरी कायम गरेर मात्र बैठक बस्न मातहतमा सर्कुलर गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाइ मन्त्री ढकालले उपहास गरेका छन् ।
भ्रष्टचार लुकाउने प्रयास
नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद ओम्नी कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न दिएको विषय सर्वाधिक विवादमा रहयो । जसलाई ओम्नी प्रकरण पनि भनिन्छ, यसका मुख्य पात्र नै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल हुन् ।
अव उनी दोस्रो अनियमिततामा समेत फस्ने सम्भावना रहेको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक आफ्नै मन्त्रालयमा किन बोलाए प्रश्न उठेको छ ।
कार्यतालिका परिवर्तन भएन भने आगामी साउन ३० गते प्रतिष्ठानकाे सिनेट बैठक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अायाेजना गरी विवादास्पद निर्णय हुने पक्का छ ।
प्रतिष्ठान उच्च स्रोतका अनुसार मातृशिशु भवन निर्माणमा भएको अनियमितता (भ्रष्टचार ) लुकाउन स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले हतार–हतारमा सिनेट बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानमा नेकपा निकट उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द गिरी उनै ढकालको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । उनै गिरी संलग्न विवादास्पद मातृशिशु भवन निर्माण अनियमितता लुकाउन मन्त्री ढकालले चलाखीपूर्ण रुपमा मन्त्रालयमा सिनेट बैठक बोलाएका हुन् ।
कार्यकारीणी समिति छलेर सिधै सिनेटमा प्रस्ताव लगिदै
सिनेटका निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने एजेन्डा कार्यकारीणि समितिको बैठकले पास गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर उपकुलपति गिरीले कार्यकारीणी समितिका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जिम्मेवारविहिन बनाउँदै, गुमराहमा राखेर प्रस्ताव सिधै सिनेटमा लाने तयारीमा लागेका हुन् ।
प्रतिष्ठानका एक कार्यकारीणि सदस्य भन्छन “यो सरासर अनियमितता लुकाउने प्रयास हो । कार्यकारिणी समितिले प्रस्ताव नै तयार नपारी कसरी सिधै सिनेटमा लान मिल्छ ?”
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाईएको सिनेट बैठकले विवादास्पद मातृ शिशु भवनमा निर्माणको म्याद थप्ने र अनियमित रुपमा भुक्तान गरिएको १५ करोड बढी रकमबारे उठेका प्रश्न लुकाउने उदेश्य रहेको बुझिएकाे छ ।
सो भवनको निर्माण म्याद थप दुई वर्षलाई स्वीकृत गर्ने गरी सिनेटमा प्रस्ताव जाँदै छ ।
प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरीरहेकाे छ ।
कार्यकारिणी समितिलाई छलेर हतार हतारमा सिनेट बैठक बोलाउनु र प्रक्रिया मिचेर पास गराउन खोज्नुको एकमात्र उदेश्य अख्तियारको कारवाही छल्ने प्रयास रहेको बुझिएको छ । मन्त्री ढकालले नियम विपरित सिनेट बैठक त्यो पनि आफ्नै मन्त्रालयमा बोलाउनुले करोडौंको भष्टचारमा उनको समेत संलग्नता हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले आफु निकट पदाधिकारीहरुको गोप्य रुपमा छलफल गरी गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी गरिएको रकम सदर गराउन लविङ्ग समेत गरेको र प्रलोभन समेत देखाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
आगामी शुक्रबार मन्त्रालयमा बस्ने प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकबाट मोरङकाे सुन्दर हरैचा, धरानको छाताचौक तथा काठमाण्डौ बाँसबारीमा रहेको जग्गा ब्यापारीलाई भाडामा दिने र सुन्दर हरैचाको जग्गामा मदन भण्डारीको नाममा अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव सिनेटबाट पास गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा हतार–हतारमा बोलाईएको सिनेट बैठकमा प्रतिष्ठान अन्य महत्वपुर्ण विषय तथा कर्मचारीले बषौं देखि राख्दै आएका मागलाई भने कुनै सम्बोधन गर्ने छैन् ।
२०७७ श्रावण २६, १६: ५२: २१